“ကျမတို့ (PDF) တွေအနေနဲ့ Soldiers Rule ပေါ့နော် Military Objective ဖြစ်တဲ့ စစ်ရေ… – PVTV Myanmar
“ကျမတို့ (PDF) တွေအနေနဲ့ Soldiers Rule ပေါ့နော် Military Objective ဖြစ်တဲ့ စစ်ရေ…
· 8 months ago ·29 Comments
“ကျမတို့ (PDF) တွေအနေနဲ့ Soldiers Rule ပေါ့နော် Military Objective ဖြစ်တဲ့ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုသာ တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့အင်အားကိုသာ အဓိကအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ၊ အရပ်သားပြည်သူတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ အရပ်သားပြည်သူတွေကို ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေ၊ အရပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို လုယက်ဖျက်ဆီးတာ‌၊ လုယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရဘူး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေ ယာဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားရမယ် စတာတွေ နောက်ပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေသတွေကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်”
Like – 22K Share – 4103
Thu Rain says:
2021-05-26 at 6:46 PM
ခု ကၽြန္ေတာ္တို့ ‌တိုက္ပြဲက အခုမွ စတာပါ တစ္ဂိုးသြင္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံသလိုပါပဲ။
စကစ ဘက္မွ ဝါဒျဖန႔္ ထားသေယာင္ရွိတဲ့ comments ေတြလဲ ေတြ႕လာရပါမယ္။ ဒီကမွ တစ္ဆင့္ ရန္သူကို အထင္ေသးမွုေတြရွိလာနိုင္ပါတယ္။
အျမဲ သတိရွိၾကပါ။ ေအာင္ပြဲခံ ေစာၿပီး အမွားအယြင္းေလးေတြလဲ ရွိလာနိုင္ပါတယ္။
“ရန္သူကို အထင္လဲ မႀကီးသလို အထင္လဲ ေသးထားလို့မရပါ”
Thinn Thinn Wai says:
2021-05-26 at 6:56 PM
အေးပါ / လုပ်ပါ ငါတို့လည်း ဒီစည်းကမ်းတွေကို နားလည်ပါတယ်/ စခ တွေက လူမဟုတ်တော့ ဘူးဟ /ရွှေတိဂုံ ကုန်းပေါ်တပ် တက်စွဲမှာ မြင်ယောင်သေး..
ငှက်တွေကို ဦးစားပေးဖြိုပါ/ မြေပြင် အတွက် ငှက်ပျောဖူး နာနတ်သီး ပေါပေါ လောလော စိုက်ပါ
နင်တို့လည်း ပြုံးစိစိ နဲ့ လက်သုံးချောင်းဘဲ ထောင်မနေနဲ့ လိုနေတာက armed force & weapons / ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်တွေကို နှိမ်နင်းဘို့ နှောင့်နှေးတာလဲ အစိုးရရဲ့ အပြစ်တခုဘဲ
Kyaw Kyaw Moe says:
2021-05-26 at 7:06 PM
ပြည်သူသာ အဓိက လို့
Yin Mar says:
2021-05-26 at 7:07 PM
စကတည်းက. အောင်မှာကို ယုံကြည်တယ်
Han Min Thu says:
2021-05-26 at 7:18 PM
အရေးကြီးတာက စစ်တိုက်မှရမှာဆိုတော့ ၁၈နှစ်အထက်တွေကို စစ်သင်တန်းပေးဖို့ရယ် လေယဉ်ပစ်လက်နက်တွေရယ်။အကောင်အထည်မပေါ်မချင်း
Donald RT Elijah says:
2021-05-26 at 7:23 PM
PDF ကိုလဲ လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပါ ။ သူတို့အတွက် လက်နက်မရှိပဲ တော်လှန်လို့မဖြစ်ဘူးနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တနိုင်ငံလုံးကို လက်နက်ကိုင်စေမယ်ဆိုရင် နာရီပိုင်း နှင့်အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။
Sankhar Neopaney says:
2021-05-26 at 8:14 PM
မေးခွန်းတွေကောင်းတယ်။လိုအပ်တဲ့ မေးခွန်း လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ထိထိမိမိမေးနိုင်တာ အသိအမှတ်ပြုရမယ်၊ကျေးဇူးလည်းတင်သင့်တယ်။
2021-05-26 at 8:51 PM
ဒုဝန်ကြီး နှင့် NUG ခေါင်းဆောင်များ အားလုံးကို လေးစားထောက်ခံပါသည်။
စည်းကမ်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာပါစေ PDF ‌အဖွဲ့ဝင်များ။
Jack Kris says:
2021-05-26 at 8:57 PM
Suchatalented deputy minister!
2021-05-26 at 9:00 PM
အားရကျေနပ်မိပါတယ်.. စည်း ကမ်းပြည့်ဝသောပြည်သူတပ်မတော်ကြီးပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုယုံကြည်ပါတယ်..ဖက် ဆစ်အာဏာရှင်ကိုရရာလက်နက်နဲ့တွန်းလှန်ကြရအောင်ပူပေါင်းပါဝင်ရန်အသင့်..
Nwe Oo says:
2021-05-26 at 9:03 PM
နုညံ့တယ် ပြတ်သားတယ် ပညာတတ်သိပ်ဆန်မှန်းသိသာတယ် အလုပ်လုပ်ရင် တိကျသေချာသောသူဖြစ်ဖို့များတယ်
Hsu YP says:
2021-05-26 at 9:15 PM
တတ်နိုင်သလောက် အဂ်လိပ်စာလုံးကို ထည့်ပြောတာကို ရှောင်စေချငိတယ်။Chain of command ဆိုတာကို လူတိုင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒေါ်စုဆို အဂ်လိပ်စကားလုံးညှပ်မပြောပါ။ကျမတို့လည်း လူတန်စားအားလုံးနားလည်ဖို့ဆိုရင် English Wordsကို ကြားညှပ်ထည့်မပြောခြင်းဖြင့် လူတန်းစားအားလုံးနားလည်ပါမယ်။စေတနာဖြင့် ပြောခြင်းပါနောိ။
Orchid Pink says:
2021-05-26 at 10:16 PM
When will you form Federal Army????
2021-05-26 at 10:26 PM
PDF အဖွဲ့ အားလုံး ယုံကြည်အားကိုးလျက်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်း သူအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။
Nilar Tun says:
2021-05-26 at 11:05 PM
How about NCO Support Channel?
Lawrencia Bang says:
2021-05-26 at 11:20 PM
ဆရာ များ သားသေ တဲ့အထဲ တို့မြန်မာ တွေ ပါတယ် အားလုံးက ဆရာ တွေဆိုတော့ စကားလုံးတိုင်း စကားလုံးတိုင်းကို ဆရာတို့ရဲ့ ညာဏ်နဲ့ ခဲဲွခြမ်း စိတ်ဖျာ ပြီး နာတော်မူကြပါ အပြစ်ကို နောက်မှတင် ကိုယ်က မှန်နေပြီလား ဆိုတာ ကို အရင် သုံးသပ်
2021-05-27 at 12:12 AM
2021-05-27 at 6:29 AM
လေးစားပါတယ် ဒုဝန်ကြီး၊တစ်နိုင်ငံလုံးက PDFများနဲ့ မြန်မြန် အချိတ်အဆက်မိစေချင်ပါတယ် ဒုဝန်ကြီး။
Ohn Kyaw says:
2021-05-27 at 2:20 PM
Thank you Minister for clear and concise answers. We will win.we must win.
2021-05-28 at 6:28 AM
PDF ကြေညာချက်တွေ အင်တာဗျူးတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာတန်း ထိုးပါ
2021-06-10 at 9:34 PM
တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ့ဘဝကတကယ့္ကို သနားဖို ့အရမ္းေကာင္ပါတယ္ ဘယ္သူကအစစ္အမွန္လဲ ဘယ္သူ ့ကိုအားကိုရမွာလဲ အခုဆို ျပည္သူအမ်ားစု တေန ့ထက္တေန ့သိသိသာသာကို စားေရးအတြက္အခက္ေတြ ့လာႀကျပီ စီးပြားေရးဆိုတာေခါင္းထဲမွာ မရွိမထားနိူင္ႀကဘူးစားဖို ့ပဲ ရုန္းကန္ေနႀကရတယ္ ေျပာခ်င္တာက အခုေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနႀကတယ္ ထူးထူးခ်ြန္ခ်ြန္လုပ္နိူင္ရင္ေတာ့ေကာင္းပါတယ္ အားလဲေပးပါတယ္ေထာက္ခံပါတယ္ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေတြႀကာ ဟိုနား သပိတ္ျပ ဒီနား ပစ္ခက္ႀက မထိေရာက္ ျပည္မႀကီးထဲမဝင္နိူင္ မတိုက္နိူင္ပဲ ဒီလိုသာ ဆက္သြားေနရင္ အခ်ိန္ႀကာလာနဲ ့မ်ွ ျပည္သူေတြဘဝပိုျပီးအခက္ေတြ ့ေစပါတယ္ စားဝတ္ေနေရးခက္လာတာနဲ ့အမ်ွ ေနာက္ဆက္တြဲ တိုင္းျပည္ရဲ ့ျဖစ္လာမွာေတြကလဲမေကာင္းေလာက္ပါဘူး ဒီအခက္ခဲေတြအျမန္ဆံုးအဆင္ေျပပါေစ
San Ngwe says:
ပြည်ပြေး ဒုဝက မမရေ။
အလြမ္း မိုးစက္ says:
Zaw Wai Soe says:
2021-06-29 at 1:19 PM
2021-07-09 at 7:46 AM
Zaw Thein says:
2021-07-19 at 1:23 PM
COVID နဲ့ သေတဲ့ပြည်သူနေ့စဉ် ထောင်ချီနေပြီ ရောဂါနဲ့တော့ အသေမခံနိုင်ဘူးမအလတွေကိုတိုက်ရဦးမယ် မကြာခင် စမယ့် တော်လှန်ရေး ဘယ်တော့လဲ
Bogyoke Hmugyi Maaloe says:
2021-07-22 at 6:06 PM
Soe Yan Naing says:
ဦးစိုး ဝင္း says:
2021-08-02 at 3:34 AM
သစ်ခွပွင့်သို့အလွမ်းစာ – အက်ဆေး…
Letter to Orchid Blossom (May 26/2021)